Admin – Page6– BSI Learning Academy
အပိုင်း (၁)မှာ IELTS အကြောင်းအကျဉ်းနဲ့ လေ့လာလေ့ကျင့်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေဖော်ပြပြီး၊ အပိုင်း (၂)မှာတော့ IELTS ဖြေဆိုနိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာ လေ့လာရမလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေမျှပြီး၊ အပိုင်း (၃)မှာတော့ IELTS test ဖြေဖို့ IELTS Test Registration ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်လို Last-minute Preparation တွေလုပ်သင့်သလဲဆိုတာနဲ့ Test Dates တွေ၊ Result Releasing Dates တွေအကြောင်းပြောပြပြီး အခု အပိုင်း (၄)မှာတော့ အပိုင်း (၁)မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ IELTS စာအုပ်တွေလေ့လာလေ့ကျင့်တာ အရမ်းခက်ခဲနေပါတယ် ဆိုသူတွေအတွက် မိမိရဲ့ English Skills’ Level တိုးတက်အောင်…
Admin April 13, 2018 August 1, 2018 IELTS IELTS 0
အခုတလော နယ်မြို့တွေမှာ နေထိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းအချို့က ကျွန်မဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည် တိုးတက်အောင် နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ဘာစာအုပ်လေးတွေ သင်ပေးသင့်သလဲလို့ မေးမေးကြသောကြောင့် ဒီစာလေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသိလိုသူများကိုလည်း မျှဝေလိုသောကြောင့်ပါ။ အသက် (၅)နှစ်မှ (၁၂)နှစ်အရွယ် ကလေးများကို သူတို့နှင့်ကိုက်ညီမည့် အဆင့် (English Language Skill Level) မှစ၍ အောက်ဖော်ပြပါ စာအုပ်များကို အဆင့်ဆင့် စနစ်တကျသင်ကြားပေးခြင်း၊ လေ့လာစေခြင်းဖြင့် English Language Skills များတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ the University of Oxford ကထုတ်ဝေတဲ့ Let’s Go Series မှာ Let’s Go (Let’s…
Admin April 13, 2018 September 4, 2019 Cambridge English Exams, YLE English for Young Learners 0
အပိုင်း (၁)မှာ IELTS အကြောင်းအကျဉ်းနဲ့ လေ့လာလေ့ကျင့်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေဖော်ပြပြီး၊ အပိုင်း(၂)မှာတော့ IELTS ဖြေဆိုနိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာ လေ့လာရမလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေမျှပြီးနောက် အခုအပိုင်း(၃)မှာတော့ IELTS test ဖြေဖို့ IELTS Test Registration ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ Last-minute Preparation Free Access တွေဘယ်လိုယူသင့်သလဲဆိုတာနဲ့ Test Dates တွေ၊ Result Releasing Dates တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်။ IELTS test dates နဲ့ registration fees တွေကို သိချင်ရင် အောက်ပါ website မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ http://www.britishcouncil.org.mm/…/iel…/dates-fees-locations IELTS registration…
Admin April 13, 2018 August 1, 2018 IELTS, Uncategorized IELTS 0
အပိုင်း(၁)မှာ IELTS အကြောင်းအကျဉ်းနဲ့ လေ့လာလေ့ကျင့်သင့်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို ဝေမျှပြီးနောက် အခုအပိုင်း (၂)မှာတော့ အများစုမေးကြတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ IELTS ဖြေချင်တာ ဘယ်လောက်ကြာ လေ့လာရမလဲ။ သင်တန်း ဘယ်လောက်ကြာ တက်ရမလဲ။ မိမိလက်ရှိ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် level ဘယ်လောက်ရှိလဲနဲ့ မိမိဘယ်အတိုင်းအတာအထိကျွမ်းကျင်ချင်သလဲ (Band Score ဘယ်လောက်ရအောင်လုပ်မယ်လို့ ရည်မှန်းသလဲ) ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိအနေနဲ့ နေ့စဉ် လေ့လာလေ့ကျင့်နိုင်သလား၊ အချိန်ဘယ်လောက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်မြှုပ်လုပ်နိုင်သလဲ၊ သင်တန်းကို တစ်ပတ် ဘယ်နှစ်နာရီတတ်နိုင်သလဲ၊ မိမိဘာသာမိမိ ဘယ်လောက်လေ့ကျင့်လေ့လာနိုင်သလဲ စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်မ သင်ပေးဖူးတဲ့ ကျောင်းသူ (၂)ယောက်ကို ဥပမာထား၍ ဆက်ရှင်းပြပါမယ်။…
Admin March 29, 2018 June 22, 2018 IELTS IELTS 0
IELTS (International English Language Testing System) ဟာ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုကို စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်မယ့်သူများနဲ့ သွားရောက်အခြေချနေထိုင်သူများ ဖြေဆိုလေ့ရှိကြတဲ့ စာမေးပွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ IELTS ကို သြစတြေးလျ၊ အင်္ဂလန်၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တွေက ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတစ်ခုအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ဗီဇာလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ IELTS ကို ဖြေဆိုဖို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရာမှာ အောင်မှတ်ရယ်လို့ သီးသီးသန့်သန့် မရှိပါဘူး။ အမှတ်တွေကို ပေးတဲ့အခါမှာ Band 1 ကနေ Band9အကြားပေးပါတယ်။ စာမေးပွဲလာမဖြေသူများကိုတော့ Band0ပေးပါတယ်။…
Admin March 29, 2018 July 28, 2018 IELTS IELTS 1
The Speaking test is 11-14 minutes long and is in three parts. Part 1 You will answer questions about yourself, your family and your studies, etc. Part2You will speak aboutatopic. Part3You will havealonger discussion about the topic introduced in Part 2. The…
Admin March 15, 2018 March 15, 2018 IELTS, Video IELTS, Speaking 0
IELTS ဆိုတာ ဘာလဲ
IELTS (International English Language Testing System) IELTS ဟာ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုကို စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်မယ့်သူများနဲ့ သွားရောက်အခြေချနေထိုင်သူများ ဖြေဆိုလေ့ရှိကြတဲ့ စာမေးပွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ IELTS ကို သြစတြေးလျ၊ အင်္ဂလန်၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တွေက ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတစ်ခုအနေနဲ့လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ဗီဇာလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ IELTS ကို ဖြေဆိုဖို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရာမှာ အောင်မှတ်ရယ်လို့ သီးသီးသန့်သန့် မရှိပါဘူး။ အမှတ်တွေကို ပေးတဲ့အခါမှာ Band 1 ကနေ Band9အကြားပေးပါတယ်။ စာမေးပွဲလာမဖြေသူများကိုတော့ Band0ပေးပါတယ်။ စာမေးပွဲရမှတ်များဟာ ၂ နှစ်အတွင်းမှာပဲ အကျုံးဝင်ပါတယ်။ အကယ်၍…
Admin March 8, 2018 March 8, 2018 IELTS 0
Speaking Practice (Flyers)
Cambridge English Exams (YLE) ရဲ့ Flyers Level ကို ဖြေဆိုမယ့် သားငယ်လေးနဲ့ Speaking Skill လေ့ကျင့်နေပုံလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Your Achievement is Our Commitment. Come Learn with us TODAY! B.S.I Learning Academy (Myittar Yeik Mon Branch) E – 2/5, Myittar Yeik Mon Housing, Dhamma Dana Street, Nat Chaung Quarter, Tamwe Township, Yangon, Myanmar. Ph: 09254278273, 095043135 E-mail:…
Admin March 8, 2018 March 14, 2018 Cambridge English Exams, YLE 0
Speaking Practice (Starters)
Starters Section မှာ တက်ရောက်လျက်ရှိတဲ့ ချစ်စရာ သမီးငယ်လေးရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည် လေ့ကျင့်နေပုံလေး ဖြစ်ပါတယ်။ Your Achievement is Our Commitment. Come Learn with us TODAY! B.S.I Learning Academy (Myittar Yeik Mon Branch) E – 2/5, Myittar Yeik Mon Housing, Dhamma Dana Street, Nat Chaung Quarter, Tamwe Township, Yangon, Myanmar. Ph: 09254278273, 095043135 E-mail: blueskyinterantionaleducation@gmail.com B.S.I Learning Academy (Thamein…
Admin March 8, 2018 March 8, 2018 YLE YLE 0